Mishiinka Mishiinka, Mashiinka Mashiinka Nadiifinta, Xisaabinta Qalabaynta Mashiinka
Macaamiisheena qiimaha leh
Diirada saar qalabka teknooloojiyada ee qalabyada qalabka dhismaha. Faahfaahin iyo sameynta qalab aan caadi ahayn sida waafaqsan baahida macaamiisha. waxaan ku guulaysannay xalinta dhibaatooyin badan oo wax ku ool ah iyada oo la adeegsanayo farsamooyinka miisaanka iyo tirinta macaamiisha badan.
Horumarinta illaa hadda, Feiyu waxay si guul leh uga qayb qaadatay bandhigga marar badan, sida alaabta guriga, farsamada, iwm, isla mar ahaantaas, bandhigga la xiriira wuxuu na siinayaa wadashaqeyn wanaagsan oo dhex mara macmiilka iyo annaga.
Macaamiisha soo dhaweyneysa si ay u soo booqdaan, mashiinnada baakidhkeena waxay ku guulaysatay macaamiisheeda iyo amaan badan oo macaamiisha ah oo hoos timaad kalsooni iyo xasillooni, macaamiisha Shirkadda Shiinaha iyo shisheeye ee khuseeya badanaa waxay yimaadaan inay soo booqdaan shirkadeena
Shirkadda Shanghai Feiyu packaging machinery Co., Ltd., oo lagu aasaasay 2008, ayaa loo qoondeeyay tirinta iyo xirashada qalabka wax soo saaraha. Sanado badan oo ah dadaal wax ku ool ah oo ku saabsan cilmi-baaris farsamo iyo dhiirigelinta tayada, Feiyu-Pack wuxuu noqday badeecada wax soo saarka bakhaarka iyo qaybiyaha Aasiya.
Qeybaha Kombiyuutarada ee yar yar oo tirinaya Mashiinka Mashiinka
Qalabka yar yar ee qalabka wax lagu dhejiyo MNNUMX-Miisaanka mashiinka mashiinka mashiinka 1-Mashruuca Mashruucan wuxuu ku haboon yahay in lagu xiro tiro yar (1.1-1pcs / bac), adoo isticmaalaya masaafada dheer ee u dhexeeya qalabyada, iyo hagaajinta foorarka fogaantan, samee tirinta. Habkani ma aha mid ku habboon tirinta badan, ...
Nalalka Qalabka ah Nut Bolt Xisaabinta Mashiinka Kabaha
Gogoldhig Hordhac Tilmaame-celinta qalabka wax lagu nadiifiyo ee mashiinka wax lagu xiro waxay aqbalaan nidaamka xakamaynta PLC iyo nidaamka sawirka korontada, shaashada taabashada labadaba Shiineys iyo Ingiriisi, iyo dhammaystirida tooska ah ee cabbirka, bacda samaynta, buuxinta, xirmidda, jarista iyo daabacaadda. Mashiinkaani waa qalab isku xiran, qayb ka mid ah waa tirinta iyo ...
Mashiinka Mashiinka Xirfadinta Mashiinka Xirfadda ah
Mashiinkaani wuxuu quseyn karaa in lagu xareeyo, lowska, mashiinka iyo waxyaabaha kale ee caadiga ah, adoo isticmaalaya tirinta isugeynta iyo dib-u-eegista fiber-optics, tirinta fibre-optics, miisaamida la socota tirooyinka fiber optics. ayaa ah kuwa la door bidayo. Siinta amarka, tirinta, xirmada iyo daabacaadda ayaa sidoo kale soo bandhigi kara. Ku rakibay ...
Farriin ku socoto
Shanghai Feiyu Packaging Packaging Co., Ltd
Cinwaanka: Lambarka 33, Lane 3238, Waiqingsong Road, Baihe Town, Degmada Qingpu, Shanghai, Shiinaha
Mashiinka Mashiinka Bacda
Xisaabinta Mashiinka Mashiinka
Mashiinka Xirfadaha Furaha
Mashiinka Qalabka Macmiilka
Mashiinka Kabaha Saarida
2 Bowls Mashiinka Ku Xidhxidhka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Mashiinka Mashiinka Qalabka ah ee tirtiridda
Qalabka Mashiinka Qalabka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Mishiinka Mishiinka Mashiinka Nadiifinta
Qalabka Kaydinta Mashiinka Qalabka Cuntada
Qalabka Diyaarsanaanta Qalabka Cuntada - Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Nut iyo Bolt Ambalajka Qashinka
Mishiinka Mishiinka ee Labada Boorso Iyo Khaanada